Burcadda Pakistan ee gabdhaha ka miirta dhuuxa xangullaha - BBC News Somali
Burcadda Pakistan ee gabdhaha ka miirta dhuuxa xangullaha
Image caption Booliska dalka Pakistan ayaa xiray afar qof oo lagu eedeyay inay haweeney kala baxeen dhuuxa xangullaha.
Booliska dalka Pakistan ayaa xiray afar qof oo lagu eedeyay inay haweeney kala baxeen dhuuxa xangullaha.
Booliska Pakistan ayaa BBC-da laanta af Urdu-ga u sheegay in dadkan laga shakiyay ay haweeneyda ku wargeliyeen inay keento tijaabada nooca dhiigeeda uu yahay, si ay taageero dhaqaale uga hesho dowlad goboleedka Punjab.
Booliska ayaa intaa ku daray in taasi bedelkeeda ay raggani haweeneydan ka miirteen dhuuxa xangullaha, si ay ugu iib geeyaan suuqa madow.
Raggan burcadda ah ayaa la rumeesanyahay in haween kale oo gaaraya 12 ay kala baxeen dhuuxa xangullaha, kuwaas oo uu kamid yahay ilma yar oo qangaar ah.
Mas'uuliyiinta gobolka Punjab ayaa arrintan ogaaday, kadib markii nin kamid ah dadka ku nool gobolkaasi uu ogaaday in gabadhiisa oo 17 sano jir ah laga la baxay dheecaanka xangullaha, kadib na ay tabar beeshay.
" Waxay u muuqataa in burcadani ay in muddo ah ka qowleysanayeen Hafizabad" waxaa sidaasi BBC-da u sheegay Ashfaq Axmed Khan oo katirsan booliska gobolka Punjab.
Mid kamid ah qowleysatada ayaa iska dhigay inuu u shaqeeyo cisbitaalka gobolka, isagoona dadka dhibbanayaasha u sheegay in loo baahanyahay in laga qaado nooca dhiigeeda uu yahay, si ay u noqoto qof u qalma lacago ay bixiso dowladda.
Mr Khan ayaa sidoo kale BBC-da u sheegay in haweeneyda dhibanaha ah la geeyay guri ay leedahay haweeney ka mid ah buracddaasi, si looga miiro dheecaanka xangullaha.
Ilaa iyo hadda ma cadda sida dheecaankani loogu iibin karo suuqa madow, balse wasaaradda caafimaadka ee dalka Pakistan ayaa guddi baaritaan u saartay arrintan, xili afarta qof ee looga shakiyay falkani ay gacanta ku hayaan ciidammada booliska.
Dhuuxa ama dheecaankan ayaa ah mid kujira laf dhabarta iyo maskaxda binaadmiga, taaso qofka ka difaacda dhaawacyada iyo hanfariirka.
Dhuuxan ayaa qofka looga miiraa cirbad qofka lagaga mudo laf dhabarta, waxaan inta badan dheecaankaasi lagu daweeyaa cuduro kamid ah kuwa ku dhaca binaadanka.
Ma ahan markii ugu horeesay oo dalkaasi laga soo wariyo arrimo la xiriiro la bixida xubnaha jirka binaadanka, waxay aheyd sannadkii 2016-ka markii ciidmmada booliska ee dalka Pakistan ay soo badbaadiyeen 24 qof oo loo heystay in laga la baxo xubnaha jirkooda.
Dowladda Pakistan ayaa sannadkii 2010-ka mamnuucday ka ganacsiga xubnaha jirka binaadanka, balse khubarada caafimaadka ee Pakistan waxaa ay sheegayaan in wali Pakistan ay ka jirto ka ganacsiga xubnaha binaadamka.